Yusuf Garaad: September 2015
Waxaan halkan ku soo gudbinayaa Gabay uu tiriyay Xuseen Cabdi Xalane, oo noqday Wasiirka Maaliyadda Xilligii Madaxweyne Shiikh Shariif iyo mar kale Xilligan Madaxweyne Xasan Shiikh. Gabayga oo uu aniga igu hal qabsaday, isla Gabyaaga ayaa u qoray araarta. Wuxuu yiri Xalane:
Anigoo London maraya ayaa Yusuf Garaad oo ah madaxa Laanta Af-Soomaaliga ee BBC igu yidhi “barrito Istuudiyaha noogu imow aan wareysi kaa qabannee”. Habeenki baan ka fikirey arrintaas, waxaana igu soo dhacdey, tolow ninka Soomaaliga ah ee waxgaradka ah maanta muxuu sheegi karaa, Yusuf Garaadse ciddee wax garanaysa oo uu hadalka gaadhsiin karaa. Waxaa intaas dheer khatarta ah in warkaad sheegto qolo dhibsato iyagoo kuu arkaya nin af­qabiil ku hadlaya taasoo sii hurin karta colaadaha. Gabaygan aan Yusuf ku halqabsaday tilmaan ka bixinta xaaladda Soomaaliya ka sokow arrimahaas buu wax ka ifinayaa.
Waa suurgaddoon Yuusufow, gadahan muuqdaaye
Maandhow afkaa loo ganbiyey, guul wixii jiraye
Adaa gaafan mooyeen tolkaa, geesi ka idlaaye
Gaashaanliyo sargaal gaammuriyo, gaadh hayihi beesha
Jananadi garbaha buuxsadiyo, geeshka taladiisa
La gumaad raggii gali yiqiin, gaylan dirireede
Raggi talada loo geyni jirey, nabad ha goobeene
Gadh­castiyo garaadyadi la madhi, ganafta weyne
Mooryaantaa dalkii goofisiyo, gaangis baa hadhaye
Ciddeed hadalka gaadhsiin rabtaa, oo wax garanaysa
Xamartaad bidhaan garan jirtee, gabi hillaacaysey
Wixii daar gamaamnayd wixii, fawqayo lagu gaarey
Gumucii gun iyo baar rasaas, lagu garaacaayey
Waa gidaar dalooliyo dhulaan, guri u nooleyne
Ma guurtiyo hantidi guud taniyo, gaalo laga reebay
Nin waluba intuu gaadhi karay, goosay tabartiise
Jidaad garan jid xaafado ku geyn, waa horuu gudhaye
Waa godad biyeed laamiyadi, giigsanaan jiraye
Gawaadhida gurrani gees walbay, gabi u jiidhaane
Geddii beledka loo gooshi jirey, laga gawaan raacye
Waayarradi la goo iyo xadhkihi, laydhka gayn jireye
Gudcur iyo mugday gudi hayaan, goosaankaa hadhaye
Waa galangal madhan ceelashay, gogoshu kuu tiile
Gabbal baa ku dumey reer tolkaa, geedu joogaba e’
Gacalkaa isnacay eedahaa, beesha kala geeyey
Galinkiyo dagaal lagu go’iyo, gawraciyo meydka
Islaamaha gablamay reerahaan, gaban u soo cayman
Islaamaha asaydii gu’ hore, wali ku gawriirto
Gagsan waa dadkeenii waa kaa, gees walbow qaxaye
Galbeed iyo sharqiba maatadaa, gaalo ehel moodey
Asal­guurka dhacay ceebahaa, saaran guradeenna
Waxaasoo gubtaanyo ah anoo, gudub u eegaaya
Gaw­gawda hadal gaabanoon, dunida gaadhsiiyo
Maandhow wuxuu gali karaa, waanan garanayne
Caqligaa gabaabsiyey dadkaa, maanki laga guurshay
Ninkii hadalsan gaadhsii yidhaa, way gurracayaane
Gabal gaabtay iyo BBC, fiid warkaad galiso
Guulaamooyinkay sii hurshaan, godobti aasneyde
Intay taladu geed saaran tahay, soo gondegi weydey
Gawraarta dheer iyo intay, gabi ka laadlaado
Ee collaadan guunka ah le helin, xalaan ku soo goyno
Inaan gaabsannaa ila habboon, yeynan sii gubane
Raad­reeb: in kastoon marar badan ka hadlay BBC, haddana waxaan doortey in aanan siyaasadda ka hadlin mar hadday sidaas u murugsan tahay, balse aan suugaanta siiba gabayga iyo dhaqanka xoogga saaro.
Posted by Yusuf Garaad at 21:50:00
Waxaa billaaban doonta soo noqoashada dadkii soo gutay waajibaadka Xajka.
Xujaajta Xamar iyo magaalooyin kale oo dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ah ku noqon doona waxaa ka mid ah Soomaali ka shaqeeya siyaasadda iyo qaar ka shaqeeya ganacsi laakiin wax ku darsada siyaasadda si ay hantidoodu ugu badato.
Waxaan u rajeynayaa in cibaadada, qushuuca iyo goobaha barakeysan ee ay booqdeen ay saameyn ku yeelato dhaqankooda siyaasadda iyo ganacsiga oo ay ka dhowrsadaan xuquuqda dadka, gaar ahaan hantida Qaranka ee ummadda ka dhaxeysa oo ay ku jirto hantida ma guurtada ah.
Kuwii awalba ka dhowrsanaana waxaan u rajeynayaa in ay sidooda ku socdaan.
Mudanayaasha Mooshinka Madaxweynaha oo aqbalay soo jeedinta Guddoomiyaha
Mudanayaasha Baarlamaanka ee mooshinka ka keenay Madaxweynaha ayaa galabta 12 Sept 2015 oggolaaday in ay wadahadal ka galaan dacwaddooda ka dhanka ah Madaxweynaha.
Arrintaasi waxay ka dambeysay markii uu Guddoomiyaha Baarlamaanku 11 Sept 2015 soo saaray waraaq ku talineysa in wadahadal laga galo eedeymaha ay jeediyeen Xildhibaannada Baarlamaanka ee mooshinka saxiixay.
Guddoomiyaha Baarlamaanku wuxuu hore warqaddiisa ugu sheegay in Madaxweynuhu uu diyaar u yahay in wadahadal laga galo mooshinka.
Labada dhinac waxa ay aqbaleen in laga gaabsado saxaafadda oo aan lala socodsiin nuxurka wadaxaajoodka.
Waxaa la filayaa in laba toddobaad godhood lagu ebyo wadahadalka labada dhinac, sida uu Guddoomiyuhu soo jeediyay.
Waxaan rajeynayaa in wadahadalku uu ku dhammaado is qancin iyo is afgarad u adeegaya danta Soomaaliyeed.
Shir Guddoonka Baarlamaanka waxaa dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay saarnaa cadaadis aad u fara badan oo ku saabsan maareynta mooshinka.
Welidaas waxaa dhimman qodobbo ay tahay in is af garad laga gaaro, ka hor inta aan wadahadalku furmin sida cidda mateleysa labada dhinac.
Waxaan u hambalyeynayaa Guddoomiyaha Baarlamaanka, Maxamed Cusmaan Jawaari iyo ku xigeennadiisu sida ay u maareeyeen arrintan muhiimka u ah dadka, dalka iyo Dowladnimada Soomaaliyeed.
Posted by Yusuf Garaad at 15:45:00